1 INkundla yaseKenmure-enokwenzeka yokuhlalisa i-12 - I-Airbnb
1 INkundla yaseKenmure-enokwenzeka yokuhlalisa i-12
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguKate
Indlu eqaqambileyo, enesitayile iseti kwilali entle yaseNew Galloway - ilungele intwana yokuthuthuzela ukubuyela emva kosuku lokuhamba okanye ubusuku obude bokujongwa yinkwenkwezi. Ukulala i-6, indawo ilungile kuzo zonke iindwendwe-abadlali be-solo, izibini, iintsapho kunye namaqela amakhulu, njengoko inokuvunyelwa ngokubambisana nommelwane wayo (iNkundla ye-2 yaseKenmure) ukuba ihlalise i-12.
Kutshanje ihlaziywe kwaye yakhutshelwa ngaphandle, le cottage inamagumbi okulala amathathu anelinen emhlophe yebhedi, igumbi lokuhlambela ekwabelwana ngalo kunye nebhafu kunye nokuhamba ngeshawari, ikhitshi elifakwe ngokupheleleyo elinendawo yokutyela kunye negumbi lokuphumla elinesitovu esitshisa iinkuni, i-fiber optic wi-fi kunye ITV yescreen esicaba yokuphola emva kweentsuku ezinde kwiindle ezintle zaseDumfries naseGalloway. Indawo ilungile kumaqabane, abantu abathandanayo ababodwa, iintsapho (ezinabantwana) kunye nabahlobo abanoboya (izilwanyana zasekhaya) - kwaye ingavunyelwa ngokudityaniswa nommelwane wayo okwigumbi eliphezulu, 2 Inkundla yaseKenmure (bona olunye uluhlu lwam) ukuhlalisa amaqela ukuya kutsho kwi-12. Indawo enkulu yokuphumla xa ufumanisa yonke le dolophu intle kufuneka ibonelele.
4.70 · Izimvo eziyi-43
INew Galloway yilali entle ebekwe kwindawo entle yaseDumfries naseGalloway kufutshane neLoch Ken. Ifumaneka kwiGalloway Kite Trail- apho iikhayithi ezibomvu zinokubonwa unyaka wonke- le ndawo inemisebenzi emininzi etephini: ukuloba, ukuhamba, ukukhwela ibhayisekile, ukukhwela ibhayisekile, imidlalo yasemanzini, ukukhwela ihashe nokunye okuninzi, kunye nokunye okuninzi. kunjalo ii-UKs kuqala Dark Sky Park kwiGalloway Forest ekufutshane. Ilali ngokwayo inee-pubs ezimbalwa, inani leekhefi kunye 'nendawo yenkcubeko yaseGlenkins', iCatStrand, indawo yomculo ohlukeneyo, ubugcisa kunye neminye iminyhadala. Kwaye ungaphoswa, ngo-Agasti ngamnye, ilali ibamba iMidlalo yeScottish Alternative.